Sida loo geliyaan Muqaal in YouTube si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo geliyaan duubey in YouTube si fudud oo dhaqso
Haddii aad qabto wax badan videos slideshow, waxaa jira fursad aad rabto in aad geliyaan aad slideshow in YouTube si ay ula wadaagaan qoyska iyo saaxiibada. Si kastaba ha ahaatee, marka aad u sameeyo, waxaa laga yaabaa in aad soo gaarto badan oo dhibaatooyin ka. Tusaale ahaan, aad slideshow aad u ballaaran yahay in ay geliyaan si ay u YouTube.com (in ka badan 15 daqiiqo). Ama qaabka video slideshow ah aan la aqbali karin oo ay goobta YouTube. Hadii aad dhibaato ku uploading slideshow in YouTube, sababta aan u isticmaali app caqli badan kaa caawiya xallinta dhibaatadan qodxan?
Qalab A super weyn ayaa si adag halkan lagu taliyey. Ka dib markii aad si fudud u geli info account YouTube, waxaad kaliya riix "naadiya" button ka dibna tan smart app, Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ), si toos ah u caawin doontaa in aad u naadiyo oo aad slideshow on YouTube in daqiiqo, iyadoo aan loo eegayn in ay qaab waa socon ama aan. Haddii aad slideshow video ka badan tahay 15 daqiiqo, waxa kale oo aad si deg deg ah oo fudud u jari kara in dhererka gaar ah, ama aadka u cadaadin cabbirka yar doorataa xalka hoose, heerka jir iyo heerka yara.
Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida loo geliyaan aad slideshow in tallaabo YouTube talaabo.
1 Import slideshow videos galay app this
Dooro "16: 9 Widescreen" ama "4: 3 Standard" doorasho galo interface ka dib markii aad u ordo. Markaasay aad u baahan tahay si ay u dajiyaan aad slideshow adigoo gujinaya "Import" ikhtiyaarka in dhinaca kore ee bidix ama jiidayeen files bartilmaameedka ka folder kombiyuutarka si app this. Ugu dambeyntii, jiidi video slideshow aad rabto inaad la wadaagto on YouTube in uu waqtiyadaa app ee ugu hooseysa.
2 (Ikhtiyaar) yaree file slideshow aad u size yar
Haddii aad slideshow video aad u ballaaran yahay in ay geliyaan si ay u YouTube.com. Waa hagaag, waxaa lagama maarmaan ah in aad googooyeen size- yar aan ka badnayn 15 daqiiqo doonaa. Siday u kala horreeyaan jiidi sare ee cas Time Tusiyaha in ay bar bilow iyo dhamaad dhibic ka mid ah clip ee aad rabto in aad ka dibna mar kasta oo riix badhanka maqas si ay si sax ah Macdan qeybta aad rabto.
3 slideshow Upload in YouTube
Guji ee "Samee" button, dhufatey "YouTube" tab, ku buuxi macluumaadka xisaabta iyo video sharaxaad YouTube ku kooban, ka dibna ku dhufatey "Abuur" button on geeska midig hoose si ay u geliyaan. Dabcan, haddii aad sidoo kale doonayaan in ay wadaagaan in ay Facebook ama Twitter, kaliya sax "Share to Facebook" ama "Share Twitter" doorasho.
Fiiro gaar ah: Haddii aad slideshow video yar weyn, sidoo kale waxa aad yarayn kartaa in ka yar 15 daqiiqo oo kaliya waxaa compressing. Oo waxay talaabada ugu faahfaahsan waa in ay tagaan "qaab" category halkii "YouTube" category. Dooranaysaa qaabka aad u ciriiri video sida FLV dooro heerka hoose xal video heerka, jir iyo xoogaa in goobaha Advanced hoos ku qoran. Sidaas, aad si guul leh ku yarayn kartaa dhinaca aad slideshow video aan jarida waax ka mid ah. Hadda, aad dib-u-dajiyaan karaa file cusub, wax soo saarka si ay u app this ka dibna geliyaan si ay u YouTube iyadoo la isticmaalayo habka ku xusan.